Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted ဇွန်လ 3rd, 2020
အလည်အပတ် dutchtownstl.org/grants စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးမှထုတ်ပေးမည့်အသေးစားစီးပွါးရေးထောက်ပံ့ငွေအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးသည် ၂၀၂၀ နွေရာသီတွင်ထုတ်ပေးသောထောက်ပံ့ငွေများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နွေရာသီတစ်ခုအတွင်းဤထောက်ပံ့ငွေများထဲမှတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါကသင်သည်ဤပြိုင်ပွဲအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုလိုအပ်ချက်တွေဟာအတူတူပဲရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
စိန့်လူးဝစ်၏စီးတီးသည်တည်ထောင်ခဲ့သည် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ငွေရန်ပုံငွေ COVID-4 ကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ဒေါ်လာ ၄ သန်း။ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သည့်ထောက်ပံ့ငွေငွေ၏တစ်ဝက်သည် Opportunity Zones (သို့) အိမ်နီးချင်းပြန်လည်ရှင်သန်မှုတည်ငြိမ်မှုရှိသည့်ဒေသများရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။ Greater Dutchtown အများစုသည်ဤဇုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးအတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။
COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်လျှော့။ လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ဦး စားပေးသည်။
စောစီးစွာလျှောက်ထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ရန်ပုံငွေများဖြန့်ဝေရန်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေကော်မတီသည်ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးစတင်မည်။
Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ဤထောက်ပံ့ကြေးများကိုလျှောက်ထားရန် DT2 • Downtown Dutchtown မှာဖြစ်လိမ့်မည် အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ ၃၂၀၇ Meramec ကိုဇွန် ၆ ရက်၊
သင့်တွင် FEIN မရှိပါကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဖက်ဒရယ် ၀ န်ထမ်းများ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (FEIN) သို့မဟုတ်သင်၏လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်သေချာပါစေ။
Downtown Dutchtown နှင့် ၄ င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာ၊ စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောထောက်ပံ့ငွေနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောမေးခွန်းများရှိပါကလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံပေးများနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
DT2 ၏ထောက်ပံ့ကူညီမှုဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုအခြားစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်သင်မျှဝေလိုပါက၎င်းတို့ထံပေးပို့ပါ dutchtownstl.org/grants or Facebook ပေါ်မှာဖြစ်ရပ်မျှဝေပါ.
အကယ်၍ ထောက်ပံ့ကြေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် မြို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လျှောက်ထားပါ။ လျှောက်လွှာများကိုလောလောဆယ်လက်ခံလျက်ရှိသည်။
ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်စံသတ်မှတ်ချက်များစွာရှိသည်။ အောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည် တရားဝင်မဟုတ်သော ထောက်ပံ့ငွေများအတွက်:
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လ ၁၉ ရက်တွင်အလုပ်သမား ၂၅ ဦး ထက်နည်းသောအလုပ်သမားများရှိသည်
မတ်လ ၁၉ ရက်၊ ၂၀ ဝပြည့်နှစ်အထိခိုင်လုံသော St. Louis စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားသည်
စိန့်လူးဝစ်မြို့တော်အခွန်ကောက်ခံမှု (ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်၊ ဝင်ငွေခွန်၊ ရေခွန်စသည်တို့) အတွက်ပေးဆောင်ရမည့်ငွေအားလုံးအပေါ်လက်ရှိရှိပါ။
Paycheck Protection Program (PPP) နှင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်ချေးငွေ (EIDL) တို့အပါအဝင်အသေးစားစီးပွါးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်ဖက်ဒရယ် COVID-19 ရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါ။
COVID-19 နှင့် / သို့မဟုတ် City's ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်သိသိသာသာထိခိုက်မှုရှိခြင်းနေအိမ် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများသာအမိန့်၊ ကျန်းမာရေးကော်မရှင်နာမှအမိန့် ၅"
စိန့်လူးဝစ္စ ၀ န်ထမ်းများ၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသောတာ ၀ န်ရှိသူများသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများမှအကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခမဖြစ်စေပါ။
သင်၏စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုင်စင်ကောက်ခံသူ၏ရုံးသို့သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် (314) 622-4528။ သင်၏ဝင်ငွေခွန်အကောက်ခွန်အခြေအနေကိုအခွန်ကောက်ခံသူနှင့်စစ်ဆေးနိုင်သည် (314) 622-3291။ သင်၏အိမ်ခြံမြေခွန်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခွန်၊ ရေနှင့်အမှိုက်အကောင့်များသည်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အတွက် Collector ရုံးမှအတည်ပြုနိုင်သည်။ ခေါ်ပါ (314) 622-4111 သူတို့အားမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့။
အောက်မှာ Filed DT2. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Covid-19 နှင့် DT2. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒိန်းမတ် DT2 Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေ